Goorta la diiwaan gelinayo Sidee loo abaabulaa? Maxaa dhacaya haddii aan lumo? Goorma ayay imtixaanadu? Waa maxay CM? Maxaa dhacaya haddii koorsada aan doortay aysan i soo jiidan? Ma jiraan dalxiis ku saabsan aasaaska? Yaan u tagaa haddaan fahmi waayo? Goorma ayuu sanad dugsiyeedku bilaabmayaa?...
Su'aalo badan oo aan is weydiinno intaanan jaamacadda gelin!
Raac wadadii ay mareen Juliette iyo Félix, ardayda cusub ee jaamacadda, oo la hel jawaabaha su'aalahaaga iyo taladaada si aad ugu guulaysato tillaabooyinkaaga ugu horreeya ee tacliinta sare.
MOOC waxa ugu horayn loogu talagalay ardayda dugsiga sare. Ujeeddadeedu waa in la baabiiyo cabsida oo si dhab ah wax looga qabto qaybo ka mid ah marxaladdan cusub ee nolosha.
Shaqada ardayga: si loogu guuleysto la qabsiga jaamacadda Diisambar 17, 2021Tranquillus
READ Booqashada soo kabashada ka hor iyo booqashada soo kabashada
socdaShaqooyinka deegaanka iyo qorsheynta isticmaalka dhulka